Tottenham ayaan ka cabsan doonin Manchester City marka ay ku kulmaan finalka Carabao Cup, sida uu sheegay kabtankii hore ee Manchester United Roy Keane, maadaama Jose Mourinho uusan waligiis cabsi gelin.
City ayaa kula biirtay Spurs finalka ka dhacaya Wembley Axada, Abriil 25, ka dib markii ay 2-0 kaga badiyeen deriskooda Manchester United.
Goolasha City waxaa u kala dhaliyay John Stones iyo Fernandinho, waxayna ku dabaaldegeen Old Trafford.
Manchester City iyo Tottenham ayaa kulankii ugu dambeeyay guul 2-0 ah ka gaadhay Tottenham iyada oo ay goolasha u kala dhaliyeen Son Heung-miun iyo Giovani Lo Celso bishii November, marka lagu daro saddexda dhibcood, Spurs ayaa gacanta sare lahayd. daadkeeda.
Roy Keane oo ka hadlaya ciyaarta ka hor ayaa yidhi: “Waxay noqon doontaa finalka cajiibka ah, waa rikoodh final u ah City, Pep iyo dabcan Jose – waa final cajiib ah.
“Waxay noqon doontaa ciyaar wanaagsan, Spurs waxay koob la’aan ahayd sanado badan, waxayna u noqon doontaa kulan weyn, waxayna ka baqi doonaan inay la ciyaaraan Man City. Jose wuxuu kubada u dheeli doonaa sida ugu dhaqsaha badan sameeyey guushii ay ka gaareen City.
“Ma jirto wax cabsi ah, waxay labaduba leeyihiin Son iyo Kane inay weeraraan oo ay ka faa’iideystaan ​​fursad kasta, waxaan ka hadlaynaa sheekada Pep, laakiin fiiri sheekada Mourinho – runti waa wax lala yaabo”.
Zinedine Zidane wuu walwalsan yahay